428 sailed through DCC vetting process
Out of the 444 aspiring District Coordinating Committee (DCC) candidates for the six zones in Harare province, 428 sailed through, among them being Maidei Mujuru, daughter to the late Army General Solomon Mujuru.
Those who failed to make it were allegedly dropped on suspected links to G40 cabal, among them former Zanu PF legislators Psychology Mazivisa, Betty Nhambo Kaseke and George Mashavave, former Zanu-PF Harare Provincial Secretary for Administration, Danny Musukuma, Mavis Gumbo and Tawengwa Tagarisana.
Addressing people at a Zanu PF meeting held in Harare recently, Zanu PF National Political Commissar, Victor Matemadanda urged the vetting team to be vigilant to avoid penetration by the G40, warning that those trying to manipulate the vetting system would face disciplinary action.
Cde Matemadanda informed that former Vice President, Dr Joice Mujuru was willing to re-join Zanu PF, as the party moves to embrace defectors and members that were expelled from the party by the previous administration led by the late former President Robert Mugabe. He revealed that Mujuru will soon release a statement to that effect.
Dr Mujuru was expelled from Zanu PF in 2015 after being accused of plotting against the then president Mugabe. Since then, she formed her own opposition party, the Zimbabwe People First (ZPF) party, which changed its name to National People’s Party after a split.